जारी लक डाउनलाई सदुपयोग गर्न तीनदिने आधारभूत पत्रकारिता तालिम आजदेखि सुरु | PBM News.com
चितवन २५ जेठ । जारी लक डाउनको समयलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आजदेखि तीनदिने निशुल्क आधारभूत पत्रकारिता तालिम सुरु भएको छ । भर्चुवल अनलाईन जुम प्रविधि मार्फत देश विदेशमा रहेर पत्रकारितामा रुचि राख्ने थारु समुदायका युवाहरु लाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको तालिम संघका महासचिव सन्तकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
संचार क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुका लागि तालिम प्रभावकारी हुनसक्ने थारु पत्रकार संघका सल्लाहकार एवम फोनिजका उपाध्यक्ष लक्की चौधरीले बताए । तालिमले अवसर समेत सृजना गर्न सक्ने भन्दै तालिममा उठेका विषयहरुलाई गहन रुपमा लिन सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै संघका अर्का सल्लाहकार डा. कृष्णराज सर्वहारीले यस्ता खालका तालिमले सबैलाई उर्जा दिने बताए । सबैलाई प्राप्त अवसर र यो समयको सहि सदुपयोगगर्न समेत सुझाव दिए । कार्यक्रममा पत्रकार ठाकुर सिंह थारुले तालिमलाई अवसरको रुपमा लिन आग्रह गरें । तालिममा राखिएका विषय गहन र महत्वपूर्ण रहेकाले पत्रकारितामा रुचि राख्नेहरुका लागि निकै फलदायि हुने बताए । संघका अध्यक्ष सन्तोष दहितको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको तालिममा काठमाण्डौं, नवलपुर, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, मोरङ, सप्तरी, सुर्खेत, जुम्ला देखि छिमेकी राष्ट्र भारत हुँदै मलेसिया, यूएई, साईप्रस लगातका ठाउँबाट ७० जना सहभागी छन् ।
तालिमको पहिलो दिन प्राविधिक शिक्षक दुर्गा चौधरीले पत्रकारितामा गुगल टुल्सको प्रयोग र यसको उपयोगीता बारे जानकारी दिए । यस्तै थारु पत्रकार संघका महासचिव सन्तकुमार चौधरीले आमसंचारको विषयमा सहजीकरण गरेका छन् । पहिलो दिनको तालिम निकै उत्साहजनक लागेको सहभागीहरुले प्रतिकृया दिए । मलेसियाबाट तालिममा सहभागी भएका आरएन थारुले यसअघि पत्रकारिता गर्दै आएपनि यस्तो खालको तालिममा पहिलो पटक सहभागीता जनाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।
तालिमको दोश्रो दिन भोली नेपालमा थारु संचार माध्यमहरुको अवस्था, इतिहास र सम्भावनाको विषयमा थारु पत्रकार संघका सल्लाहकार समेत रहेका अन्नपूर्णपोष्टकर्मी डा. कृष्णराज सर्वहारी र समाचार के हो ? समाचारको स्रोत कसरी खोज्ने ? समाचार लेखन लगायतका विषयमा रेडियो कान्तिपुरकी प्रार्वता चौधरीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । यस्तै भोली नै अनलाईन पत्रकारिता कसरी गर्ने विषयमा थारु पत्रकार संघकी उपाध्यक्ष उन्नती चौधरीले आफ्नो अनुभव सहित सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।
फिल्ड रिपोटीङ कसरी गर्ने, विपद्को बेला रिपोटीङ गर्नुपर्ने पूर्व तयारी के के हुन भन्ने विषयमा मंगलवार कान्तिपुर दैनिकका ठाकुर सिंह थारुले सहजीकरण गर्नुहुने छ । यस्तै मंगलवार नै नेपाली पत्रकारिताको शैली र न्यू मिडियाको बारेमा गोरखा पत्र दैनिकका लक्की चौधरीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । तालिमको अन्तिम सेसनमा भने नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ( फोनिज ) का केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङले पत्रकारिताको आचार संहिताको बारेमा सहजीकरण गर्नुहुनेछ । तालिम प्रत्येक दिन दिउँसो १ बजेदेखि साढे ३ बजे सम्म चल्नेछ ।
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा अवरोध